GrexIt: Repository fahalalana ho an'ny mailaka Google Apps | Martech Zone
Alahady 8 aprily 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Grexit dia rindrambaiko ho fampiharana serivisy namboarina Google Apps izay ahafahan'ny orinasa manangana trano fitahirizana fahalalana. Ny mailaka no mbola fitaovana voalohany amin'ny serasera amin'ny alàlan'ny tranokala… ary iray taonina ny fahalalan'ny orinasa no voatahiry ao amin'ireo hafatra alefa sy raisina amin'ireo mpivarotra, mpanjifa ary ny vinavina.
Grexit dia manolotra ireto manaraka ireto:
Repository amin'ny email zaraina - fanondroana mailaka zaraina sy tadiavina zaraina.
Labely nozaraina ao amin'ny Gmail - manome fampiharana tsotra miaraka amina mailaka miorina amin'ny tranokala Google Apps ny fampiharana.
Fampidirana Google Apps - Register ary ampidiro mivantana amin'ny alàlan'ny Google Apps.
Fitsipika momba ny mailaka - Mametraha fitsipika Fetch ho an'ny marika Gmail mba hahatonga GrexIt hisintona ny resaka mailaka rehetra miaraka amin'io marika io.
Fitsipika fidirana - Fanaraha-maso fidirana grained tsara ho an'ny mailaka ao amin'ny GrexIt amin'ny alàlan'ny tag.
Fampahalalana: GrexIt dia nanome rohy Affiliate manokana hanarahana ny fisoratana anarana avy amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fototra fahalalana mailakagoogle appsmailaka googleGoogle +grexit
Vidin'ny olombelona amin'ny fanadihadiana ny angona